प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि थप तीन मेडिकल कलेजमा शुद्धिकरणको छापा – Hamrosandesh.com
प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि थप तीन मेडिकल कलेजमा शुद्धिकरणको छापा
कोहि फोर्सको जागिर छोडेर अमेरिकी दुतावासमा जागिर खान जाने अनि आफू अनुकुल नभएपछि लुरुक्क फर्कने । कोही हुँदाखादाको फोर्सको पद छोडेर सिइओ बन्न आवेदन हाल्ने अनि सिइओमा फेल भएपछि यतै फोर्समा ठिकै छ भन्ने । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठनमा कार्यरत बिशिस्ट श्रेणीका हाकिमले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्दैन ? यस्तो चर्चा प्रहरी मुख्यालय नक्साल र शसस्त्र प्रहरी मुख्यालय हलचोकमा चलेको छ ।
कुरो शसस्त्र प्रहरीको कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेजमा प्रमुखका रुपमा कार्यरत डिआईजी प्रविण श्रेष्ठ जागिर खान महाराजगंजस्थित अमेरिकी राजदुतावासमा छिरेको एउटा प्रसंग छ । त्यस्तै अर्को प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रमुखका रुपमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एआईजी ठूले राई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिईओ बन्न गएको प्रसंग छ ।
शसस्त्र डिआईजी श्रेष्ठ माथिल्लो निकायलाई जानकारी नगराई जागिरका लागि दुतावास पुगेको आरोपमा छानविनको दायरामा परेका छन् । गएको ६ गते सरकारी गाडीमा चढेर उनी दूतावास छिरेका थिए । त्यहाँ उनले करिव एक घण्टा समय बिताएको बताईन्छ । श्रेष्ठलाई पदआचरण अनुरुप काम नगरेको भनेर गृहमन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रालयले बनाएको कुटनीतिक आचासंहिता अनुसार सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगमा प्रवेश गर्न मनाही गरेको छ । तर औपचारिक कार्यक्रम र निमन्त्रणामा जान पाउने व्यवस्था आचारसंिहतामा उल्लेख छ । शसस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठले विदेशी नियोगमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने र नलिए कारबाही हुने जानकारी दिए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सिईओ) बन्न निवेदन हालेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राई सिईओ बन्न असफल बनेका छन् । गृहमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सर्ट लिस्टमा आफ्नो नाम नपरेपछि एआईजी राई तानावमा परेका छन् ।
सर्ट लिस्टमा नाम नपरेपछि राईको सिईओ बन्ने ढोका बन्द भएको छ । आगामी माघमा अवकाश पाउदै गरेका राई सिईओ बन्न गृहसचिव प्रेमकुमार राई मार्फत दबाब दिएका थिए । एआईजी राई सिईओ भएपछि रिक्त एआईजी बन्न केदार रिजालहरु दौडधुप गरेका थिए । केही कनिष्ठ डिआईजीहरु अवकाश लिनुअघि एआईजी बन्नका निम्ति दौडधुप गरिरहँदा बरिष्ठ डिआईजीहरु अलमलमा परेका थिए । राई सिईओका निम्ति अयोग्य भएपछि बरिष्ठ डिआईजीहरु दंग परेका छन् ।
सिईओका लागि राईसहित १३ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो । जसमध्येबाट तीन जनाको नाममा छनोट भएको हो । अनिल पोखरेल, डा. प्रेम बहादुर थापा र विष्णु प्रसाद खरेलको नाम सिईओका लागि सिफारिस भएको हो । उनीहरु तीनमध्येबाट सरकारले एक जना छान्ने छ ।